Aktarada Kareena Kapoor oo Uur Qarsoodi ah qaaday? - iftineducation.com
Kareena Kapoor Oo Uur Qarsoodi Ah Qaaday
iftineducation.com –Kareena Kapoor oo ah Jilayaa caan ah mudo badan uu jeceyl kala dhaxeeyay Saif Ali Khan ayaa waxay si hoose qaaday iyadoo uu aqal galkooda ka dhimanyahay bilooyin qura.
Aktaradan ayaa laga qaaday sawir iyadoo aan ka warqabin xilli ay joogtay Air Port oo ay xirneyd dharka jiimka lagu ciyaariyo balse waxay isku daysay in ay qariso uurka aan lala ogen ee iminka soo baxay.
Aad ayay u adagtahay in ay jawaab waafi ah ka bixiso Aktarada sawirkani lagu xaday tani waxay calaamad u tahay in labada jilaa ee Saif Ali Khan iyo Kareena Kapoor ay hormarsadeen calamadooda jaceylka.
Labadani lamaane ayaa horey u shaaciyay in bishan aynu ku jirno 10 keeda uu dhici doono doonansheeda balse tani aya soo dedejin doonta si aan saxafadda u daba dhigan uurkani cusub aqalgalka ka hor.
Kareena Kapoor ayaa ku mashquulsan Filim ay dhawaan la keentay balse aan shaashada laga daawan jilaaga Imran Khan filim kaas ayaa waxaa loogu magac daray Ek Main Aur Ek Tu’ .(Aden yo)